केटीयम चढ्ने रहर छ तर पैसाको कमि छ भने आयो खुसीको खबर, केटीयमले ल्यायो अत्याधुनिक फिचर सहितको सस्तो ड्यूक १२५ (मूल्य सहित) « Sajha Page
प्रकाशित मिति: August 27, 2019
काठमाडौं, १० भदौ । युवाहरुको रोजाईको बाइक केटीएमले नया मोडल नेपालमा पनि सार्बजनिक गरेको छ । आज बुधबार नाडा अटो शोमा नेपालको आधिकारीक वितरक केटीएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङले कम मूल्यको तर अत्याधुनिक फिचर सहितको ड्यूक १२५ सार्वजनिक गरेको हो ।
१२५ सिसिको बाइक भएपनि यसको पावर बजारमा उपलब्ध १५० सिसिको बाइकलाई पछी पार्ने खालको रहेको छ । ड्यूक १२५ मा १२४.७ सीसी लिक्वीड कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिन रहेको छ। जसले ९ हजार २ सय ५० आरपीएममा १४.५ बीएच पावर उत्पादन गर्छ भने ८ हजार आरपीएममा १२ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ ।
सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखेर यसमा एबिएस पनि उपलब्ध छ जुन १२५ सिसि सेग्मेंटको बाइकमा पहिलो हो । ६ स्पीड गियरबक्सको इन्जिन लगाइएको यस बाइकको इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल पनि अत्याधुनिक रहेको छ । त्यति मात्र हैन यसमा रहेको टीएफटी कलर डिस्प्ले, ब्लू–टुथ स्मार्टफोन इन्टिग्रेसन, फूल–एलईडी हेडल्याम्प, मेटजेलर टायर जस्ता फिचरले यस बाइकलाई निक्कै आधुनिक बनाएको छ । टप स्पिड १२० किलोमिटर रहेको यस बाइकको तौल १४८ किलोग्राम मात्र रहेको छ ।
यत्तिका धेरै पावर जेनेरेट गरेपनि यस बाइकमा रहेको फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमले गर्दा प्रति लिटर ४५ किलोमिटरको माइलेज दिने कम्पनिको दावी रहेको छ । फ्रन्ट अफसाइड डाउन फोर्क र रियर मोनोसक सस्पेन्सनले गर्दा यसमा सवारी निक्कै आरामदायी रहने पक्का छ ।
युरोप युरोप भनेर पागल नबन्नोस ! १० लाख खर्च, २५ हजार कमाइ यहि हो पोल्याण्ड,पोर्चुगल लगायतका युरोपियन देशको वास्तविकता ! हजारौ नेपालीको बिचल्ली
ईश्वर एउटै हुन् नाम फरक हो, “द प्रेसियस गिफ्ट” हेर्नुहोस लघु चलचित्र (भिडियो)
अब छोरा छोरी के जन्माउने ९९% सफल विधि यस्तो छ
३ करोड नेपालीको रगत तात्ने भिडियो ! महाकाली बेच्दा कसले के भनेका थिए? (भिडियो हेर्नुहोस)
सक्नु हुन्छ सहयोग गर्नु होला, सक्नु हुन्न भने शेयर गरेर अरुलाई सहयोग गर्ने मौका दिनुहोला
क्यालेन्डर तरिकाबाट गर्भ रोक्ने तरिका हेरौ
आजकाल राजधानीमा फेसबुकबाटै हुन्छ यौन व्यवसाय ! यौनकर्मीले यसरी गर्छन सम्पर्क ...
विज्ञापनका लागि : फोन- ९८६००३०३०३ , इमेल- saj[email protected]